Andre Silva oo xalay jebiyay rikoodh uu 11 sano kahor Kaka dhigay!! – Gool FM
Andre Silva oo xalay jebiyay rikoodh uu 11 sano kahor Kaka dhigay!!
Raage September 15, 2017
(Vienna) 15 Sebt 2017 – Qannaaska cusub ee kooxda AC Milan ee Andre Silva ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee Europe seddexleey ka ansixiya tan iyo 2006 oo uu Liete Kaka, ciyaartii ay xalay 5-1 kusoo garaaceen Austria Vienna.
AC Milan spent around £170m in the summer and it has paid off.
They thrashed Austria Vienna in their #UEL opener.https://t.co/KUxZix92kj pic.twitter.com/nFc5lMqhEC
— BBC Sport (@BBCSport) 14 september 2017
Laacibkan 21-jirka ah ee reer Portugal oo xagaagan Milan kaga soo biiray dhanka FC Porto ayaa xalay 3 gool u dhaliyay Rossoneri, kulan-bilowga guruubka D ee Europa League, iyadoo ay goolasha kale Milan u dhaliyeen Hakan Calhanoglu iyo Suso.
Andre Silva ayaa u mahadceliyay ciyaartooyda Milan gaar ahaan Calha oo uu qado gaar ah u ballan qaaday iyo Kalinic.
“Waxay ahayd kulankaygii iigu horreeyay ee aan kusoo bilowdo Europa League, waxaan dhaliyay seddexleey waxaana abaal uga hayaa saaxiibadeey. Bandhig wanaagsan baannu samaynay,” ayuu Silva u sheegay Sky Sport Italia.
Andre Silva becomes the first Milan player to score a hat-trick in Europe since Kaka in 2006 🎩🔴⚫️ pic.twitter.com/aN2YgaXRiZ
— B/R Football (@brfootball) 14 september 2017
Marcelo oo ka hadlay xiddigii ugu fiicnaa uu ka garab ciyaaro iyo kii ugu adkaa uu ka hor yimaado
Kooxda Inter Milan oo markale weerar ku qaadaysa PSG oo ay ka rabto Rabiot